Alain Ratsimbazafy « Adino ny sosialim-bahoaka ! »
Fikambanana Assanati Famo Gidraka Nanampy mpiara-belona an-jatony
Betsaka ireo olona sahirana teto amin’ny firenena vokatry ny fihibohana. Ankoatra ireo very asa mivantana dia tsy vitsy ireo nihitsoka tanteraka mihitsy ny fitadiavany toy ireo mpanankato nanerana ny Nosy.
PFNOSCM/ Vohifiraisana Hanamafy ireo rantsamangaika any amin`ny faritra
Nanatanteraka atrikasa hahafahana hamaritra ny asan` ireo rantsamangaikany amin` ireo faritra 22 manerana ny nosy ny firaisamonim-pirenena PFNOSCM/ Vohifiraisana.
Ady amin’ny kere Hiverina any Androy ny Filoham-pirenena
Ny 22 oktobra izao no hotokanana ny « Centre de Rehabilitation Nutritionnelle et Médicale » izay ivon-toerana iadiana amin`ny kere any amin`ny faritra Androy, izay iarahan` ny minisiteran` ny fahasalamam-bahoaka sy ny ONN miasa.
Faritra Boeny Miteraka disadisa ny fitrandrahana drakaka
Nikatona ny 15 oktobra lasa teo ny tsena fitrandrahana drakakaka manerana ny fari-dranomasina eto Madagasikara ary tsy hisokatra raha tsy amin` ny 15 desambra izao.
Vatsy tsinjo sy tosika fameno 7,80% n’ny Malagasy no nahazo fanampiana
Miisa 421 415 tokantrano no nizarana an’ireny tosika fameno sy vatsy tsinjo ireny tamin’ny faritra izay tena voa mafy tamin’ny valanaretina: Analamanga, Alaotra, Analajnjirofo, Diana, Amoron’i Mania,…
Vonjy aina any Atsimo Tsy mikely soroka ny tafika
Mirindra araka ny lamina efa napetraka ny iraka sahanin'ny BMM sy ireo ministera tompon'andraikitra amin'ny famonjena ireo mponina ianjadian'ny kere any atsimo, hoy ny tatitra avy amin’ny Minisiteran’ny fiarovam-pirenena.
Distrikan’i Tsihombe Nizara sakafo sy rano ny Minisiteran’ny mponina
Nizara Sakafo manta sy masaka ary Rano, niaraka tamin-dy Masera tany Tsihombe ny Minisitry ny mponina Rtoa Bavy Angelica sy ny Depiote voafidy tany an-toerana Rtoa
Ny fivoriana ara-potoana faharoa eny anivon’ny antenimieram-pirenena hatrehina ankehitriny,
hoy ny depiote Alain Ratsimbazafy dia ny fandinihana ny tetibolam-panjakana ho an’ny taona 2020. Io no mila resahana sy halalinina. Hifanaraka amin’ny toky nomen’ny filoham-pirenena ve ary hifanaraka amin’ny filam-bahoaka ? Tsapanay ankehitriny, hoy izy, fa anisan’ny adino mihitsy ny sosialim-bahoaka. Ilaina, noho izany, ny fampifanarahana ny tetibola amin’io ary koa mikasika ny ara-pahasalamana satria mipaka mivantana amin’ny fiainana andavanandron’ny mponina ireny ka mila jerena akaiky, hoy hatrany ity solombavambahoakan’I Madagasikara ity.